လက်ကောက်ဝတ်ပတ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိရိယာ (Automatic Blood Pressure Monitor) | Vootee
သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာရာတွင်လက်ကောက်ဝတ်အနေအထားပုံစံမှန်ကန်ကြောင်းနှင့် တိုင်းတာနေစဉ်ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားနေကြောင်း အချက်ပြသင်္ကေတပါဝင်သောကြောင့် တိကျမှန်ကန်သောတိုင်းတာချက်အဖြေကိုရရှိနိုင်သည်။သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာနေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ရလဒ်အဖြေ၌ဤသင်္ကေတပေါ်လာပါက နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ၍ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာရန် လိုအပ်ပါသည်။၁။ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာနေစဉ် နှလုံးခုန်နှုန်းအဖြေမှာ ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်းမှုမမှန်နှလုံးခုန်သံဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သွေးပေါင်ချိန်ရလဒ်အဖြေတွင် မူမမှန်နှလုံးခုန်နှုန်းအချက်ပြသင်္ကေတပေါ်လာပါမည်။
၂။ နှလုံးခုန်နှုန်းပြအဖြေမှာများနေသော်လည်း မူမမှန်နှလုံးခုန်သံမရှိပါက မူမမှန်နှလုံးသံအချက်ပြသင်္ကေတကိုမပြပေးပါ။
၃။ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာပြီးနောက်ရလဒ်အဖြေတွင်မူမမှန်နှလုံးခုန်သံအချက်ပြသင်္ကေတပေါ်နေပါက နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံတိုင်းတာရပါမည်။ သင့်သွေးပေါင်ချိန်အဖြေတွင် မူမမှန်နှလုံးခုန်သံအချက်ပြသင်္ကေတ မကြာခဏပေါ်နေပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
This entry was posted in Business and tagged က, ပတ, လက, သ, ၀တ. Bookmark the permalink.
← Structural Steel H Beam
MRI SPITI (1.5 T MRI) Whole Body Magnetic Resonance Imager →